နည်းလမ်းများ « ၂၁ရာစု မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးစီးပွားရေး
Home » နည်းလမ်းများ
နည်းလမ်းများ	2B ပရိုဂရမ်နဲ့ ဂျပန်ကိုသွားကြမယ်။ ပရိုဂရမ်ကို A , B နဲ့ C ဆိုပြီးတော့ သုံးမျိုး ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ ပရိုဂရမ်တွေအတွက် သင်ဒါတွေရှိရင် ရပြီလေ။
SE မှ RCD အထိရာထူးရှိသူနှင့်အမှတ် 300pv ရှိရပါမည်။
မိမိ Group နှင့်ပေါင်း၍အမှတ် 28,000-pv (Push up) လုပ်ချိန်4 လ( ဆက်တိုက်ဖြစ်ရန်မလို)
သတ်မှတ်ထားသောလမှာ (12 လပိုင်း 2012) မှ (5 လပိုင်း 2013) အထိ ( စုစုပေါင်6းလ)
အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ နံပါတ်2ထဲက မိမိ Grou နဲ့ပေါင်းမှတ် 28,000-pv ဆိုတာ
အောက်ကအချက်2ချက် ပါရှိရပါမည်။
4.1-ရေသန့်စက် Beyond Water5လုံး
4.2-သစ်သီးစုံဖျော်ရည် B’yonk3ဖာ ( အထုပ်90 (သို့) အထုပ်180 )
5. ဂျပန်ခရီးစဉ်သွားမည့်လ7လပိုင်း 2013 ( ပြီးတော့ ၊ ဒါမှမဟုတ် ) 8 လပိုင်း 2013
မိမိ Group နှင့်ပေါင်း၍အမှတ်18,000-pv (Push up) လုပ်ချိန်3လ
အောက်ပါ ပစ္စည်းများကို မိမိအဖွဲ့ထဲက (4 လထဲမှာ တစ်လလကို ပရိုဂရမ်လုပ်နေချိန်အတောအတွင်းဖြစ်ရပါမည်။)
3.1- ရေသန့်စက် Beyond Water18 လုံး
3.2- သစ်သီးစုံဖျော်ရည် B’yonk9ဖာ ( အထုပ်90 (သို့) အထုပ်180 )
4. အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ နံပါတ်2မှာ လုပ်ချိန်3လနှင့် နံပါတ်3မှာလုပ်ချိန် 1 လ စုစုပေါင်း4လ ဖြစ်ပါသည်။
5.ဤ ပရိုဂရမ်လုပ်ချိန်ကို ရောင်းအား (12 လပိုင်း 2012 ) မှ (5လပိုင်း 2013 ) အထိဖြစ် (6) လအတောအတွင်းဖြစ်ပါသည်။
6. ဂျပန်ခရီးစဉ်သွားမည့်လ7လပိုင်း 2013 ( ပြီးတော့ ၊ ဒါမှမဟုတ် ) 8 လပိုင်း 2013
မိမိ Group နှင့်ပေါင်း၍အမှတ်15,000-pv (Push up) လုပ်ချိန်3လ
3.1- ရေသန့်စက် Beyond Water 20 လုံး
3.2- သစ်သီးစုံဖျော်ရည် B’yonk 12 ဖာ ( အထုပ်90 (သို့) အထုပ်180 )
5. ဤ ပရိုဂရမ်လုပ်ချိန်ကို ရောင်းအား (12 လပိုင်း 2012 ) မှ (5လပိုင်း 2013 ) အထိဖြစ် (6) လအတောအတွင်းဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ပရိုဂရမ်လုပ်ချိန်ကို ရောင်းအား သည် (12 လပိုင်း 2012 ) မှ (5လပိုင်း 2013 ) အထိဖြစ် (6) လအတောအတွင်းဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာပြန်သူ ၏ ဝန်ခံချက်။ ။
ဘာသာပြန်ထားသော စာသားတွင် အမှားအယွင်းများရှိခဲ့ပါက ဘာသာပြန်သူ၏အားနည်းချက်သာဖြစ်ကြောင်း ရိုးသားစွာ ဝန်ခံပါသည်။
ကိုခင်မောင်ဦး ( Vichan ) မော်လမြိုင်
Thai Phone: 0854007782 ( Myanmar Phone 09425271099 , 0949803738 )
ကျွန်တော် ဒီလ ဇူလီယန်မှာ SE ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီလိုဖြစ်ရတာကလည်း အပေါ်လူတွေရဲ့ ကျေးဇူး( သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာ) နှင့် အောက်လူတွေရဲ့ ၀ယ်လိုအားတွေကြောင့် ယခု SE ရာထူးကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့ အပေါ်လူ နှင့် အောက်လူ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ဝင် များအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလို ရာထူးရဖို့ဆိုတာ ၀ယ်လိုအား ဘတ် ၂ သိန်းကျော်ဖြစ်မှ ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် တန်ဖိုးထားပါတယ်။ SE ရာထူးရဖို့ဆိုရင် အမှတ် တစ်သောင်းရှစ်ထောင် ပြည့်ရမှာ ဖြစ်သလို နောက်ဆုံးလတွင် မိမိ အမှတ် ၃၀၀ အပါအ၀င် အောက်လူ အမှတ် နှင့် စုစုပေါင်း အမှတ် ၃၀၀၀ ဖြစ်ရပါမည်။ ဥပမာ – ကျွန်တော်သည် မတ်လတွင် အမှတ်ပေါင်း ၁၅၆၂၀၀ ရှိပါတယ်။ ယခုလတွင် ၅ ရက်နေ့ထွက်သည့် စာရင်းအရ ကျွန်တော်က အမှတ် ၃၀၀၊ အောက်လူက ၃၀၀၀ ကျော်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် SE ရာထူကို ရရှိသွားပါပြီး။ တချို့ကမေးတယ် SE ဖြစ်ရင် ဘာအခွင့်အရေး ရသလဲတဲ့။ အဲ့ဒီတော့ အက်စ်အီး ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ (၁) ၂၂ % နှုန်းခံစားရမှာပါ ထို့ကြောင့် မိမိအဖွဲ့ထဲက မည်သူမဆို ပစ္စည်းဝယ်တိုင်း ၁ မှတ်ကို ၁ ဘတ်ခွဲလောက် ရပါတယ်။ (၂) အမှတ် ၅၄၀၀ ဖြစ်ရင် x ၂ x ၆ % (၃) အမှတ် ၁၂၀၀၀ ဖြစ်ရင် x ၄ x ၆ % စတဲ့ အခွင့်အရေးကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့အောက်လူများသည်လည်း မကြာမှီ SE ဖြစ်လာတဲ့အခါ SM, SSM, DSM, RCM စတဲ့ ရာထူးများကိုလည်း စွတ်ခူးလာနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ရရှိမဲ့ အခွင့်အရေးများသည် တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပါလိမ့်မယ်။
မိတ်ဆွေတို့အနေဖြင့် အမှတ်သည် ၃၀၀ ပြည့်နေပြီဆိုပါက နောက်ထပ်လည်း ၀ယ်စရာရှိတယ်ဆိုရင် ထိုအမှတ်များကို နောက်လတွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သိမ်းဆည်းနိုင်ရန် ပစ္စည်များ ၀ယ်သည့်အခါ စာရွက်ပေါ်တွင် ZT2 ရေးပေးလိုက်ပါက နောက်လစာရင်း ၀င်သွားပါလိမ့်မည်။ မိတ်ဆွေတို့အားလုံး ဘ၀ကို သာယာအေးချမ်းစွာဖြင့် နေထိုင်နိုင်ကြပြီး လောကီအကျိုး လောကုတ္တရာ အကျိုးကို သယ်ပိုးနိုင်ကြပါစေ။
သတိရစွာဖြင့်စာရေးလိုက်ပါတယ်။သတိရလို့လည်းချမ်းသာကြီးပွားပြီးသားစဉ်မြေးဆက်လည်းကြီးပွားမယ်အလုပ်လည်းပင်ပန်းစွာမလုပ်ရပဲဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိဖြင့်ကုသိုလ်လည်းရ၀မ်းလည်းဝတဲ့အလုပ်တခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတောဇူလီယန်ဆိုတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္မဏီဖြစ်ပါတယ်။ပင်ရင်းကုမ္မဏီကတော့မလေးရှားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးထိုင်း၊စင်ကပူနှင့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့မှာကုမ္မဏီဖွင့်လှစ်ပြီးတရားဝင်ရောင်းချနေပါတယ်။သူတို့ကတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကြောငြာခြင်းနှင့်လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးခြင်းမရှိပဲကုန်းပစ္စည်းရောင်းပေးသူများကို၅၁ရာခိုင်နှုန်းအကျိုးအမြတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပိုင်ရှင်ကတော့အရင်းနှင့်အမြတ်၄၉ရာခိုင်နှုန်းပဲပြန်ယူပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်ဒီကုမ္မဏီမှာရှယ်ယာဝင်ကြေးအဖြစ်၂၅၀ဘတ် ( ၇၀၀၀ကျပ် ) ၀င်လိုက်တာနဲ့အထူးလျော့ဈေး၂၂ % မှ၂၅ % အခွင့်အရေးရရှိပါတယ်။အခြားသူများကိုလည်းမိမိကဲ့သို့ဝယ်သုံးစွဲလာအောင်ပြုလုပ်ပေးသည့်အခါသူတို့ရဲ့ဝယ်လိုအားနှင့်မိမိတို့ရဲ့ဝယ်လိုအားပေါ်မူတည်ပြီး၃ % မှ၂၂ % အထိဘောနပ်ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခြားအခွင့်အရေးတွေလည်းရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကုမ္မဏီမှာဝယ်ရောင်းလုပ်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအများကြီးတလကိုဘတ်၂သိန်း ( သိန်း၅၀ကျပ် ) နှင့်အဲ့ဒီရဲ့အောင်မှာရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပြောရင်တော့ယုံစရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမှာလာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးမြေးမြစ်တွေကိုအမွေအဖြစ်လွှဲပေးနိုင်ပါတယ်။အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီကုမ္မဏီကပစ္စည်းတွေကိုမသုံးလို့မလုပ်လို့လည်းရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးရာထူးတွေကိုကမဖျက်သိမ်းပါဘူး။ကိုယ်ပိုင်ကုမ္မဏီလိုပါပဲများများလုပ်ရင်များများရမယ်မလုပ်တော့လည်းမရဘူးပေါ့။
– ဘောနပ်လိုချင်ရင်မိမိတို့သည်လစဉ်အမှတ်၃၀၀ဘိုးကိုဝယ်ယူရမည်။သူ၏တန်းဖိုးသည်တစ်သိန်းကျပ်ခန့်ရှိသည်။ထိုအမှတ်၃၀၀ကိုမဖြည့်ပါကဘောနပ်မရရှိပါ။ဒါကလည်းမလုပ်ခင်ကတော့အခက်အခဲလို့ထင်လိမ့်မယ်။ပစ္စည်းကိုကိုယ်လည်းသုံးမယ်ဝယ်ရောင်းလည်းလုပ်ခြင်းဖြင့်ဒီအမှတ်၃၀၀ ( တစ်သိန်းကျပ် ) ဟာရယ်စရာကောင်းလာလိမ့်ပါမယ်။
အမှန်တကယ်သတိရခြင်းနှင့်အကျိုးအမြတ်ရရှိစေချင်၍ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့အမျိုးမျိုးသံသယစိတ်တွေရှိနိုင်ပါတယ်။တကယ်လုပ်ကြည့်လို့တကယ်အကျိုးအမြတ်တွေကိုရရှိလာတဲ့အခါကျွန်တော့်ကိုတသက်လုံးကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ( အောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါမအောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့ဆင်ခြေတွေကိုနားမယောင်ပါနှင့်၊အတွေးအခေါ်လေးတချက်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဘ၀ပြောင်းသွားမယ်၊မသိသူကျော်သွားသိသူဖော်စားဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်တွေကိုလက်ခံပါ) ———————*************************————————–
ကုမ္မဏီတွင်၂၅၀ဘတ်ဖြင့်ရှယ်ယာဝင်ပါ။ထိုအခါကျမှကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ရရှိပါမည်။ထိုကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ဖြင့်ဇူလီယန်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူပါကအမှတ်ရပါလိမ့်မည်။ထိုအမှတ်များများလာပါကဘောနပ် ( ငွေ) ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။အချို့လူများသည်ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ဖြင့်ကုမ္မဏီထံမှတိုက်ရိုက်မ၀ယ်ပဲအခြားသူများထံမှဝယ်ယူကြသည်ကိုသိရှိရပါသည်။ထိုသူအတွက်အလွန်သနားစရာကောင်းပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှတ်များသည်များလာသည့်အခါ၃ % မှ၂၂ %ရာခိုင်နှုန်းဘောနပ်ရရှိပါသည်။၂၂ရာခိုင်နှုန်းသည်၁မှတ်ကို၁ဘတ် ( ၂၅ကျပ်ခန့် ) ဆုံးရှုံးရမည့်အပြင်အခြားအခွင့်အရေးများဖြစ်သည့်ကား၊အထူးလစာနှင့်အမွေဆက်ခံခွင့်စသည့်အခွင့်များကိုလည်းဆုံးရှုံးရပါလိမ့်မည်။
1. မိမိသည်ဇူလီယန်တွင်ရှယ်ယာဝင်ပြီးသည်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအကြောင်းကိုသေချာလေ့လာပါ။တကယ်သုံးဖူးတဲ့သူတွေကိုမေးမြန်းပါ။ဇူလီယန်မှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုမေးမြန်းပါ။ပြီးလျှင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းတိုင်းကိုဝယ်သုံးကြည့်ပါ။တချို့သည်ပစ္စည်းတော့သုံးဖူးတယ်သူရဲ့အကျိုးအာနိသင်အကြောင်းလည်းမသိလေ့လည်းမလေ့လာတော့အဆိုးအကောင်းကိုမသိ။သုံးတော့သုံးတယ်မစွပ်မပွတ်သုံးတော့လည်းဆေးပတ်မလည်တော့အကျိုးအာနိသင်ကိုမရရှိနိုင်ဘူး။ဥပမာကင်ဆာသမားများအတွက်ဘီယန်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တစ်ဘူးကိုတစ်လစာဖြစ်တယ်သုံးဘူးသောက်ရမယ်။ဒါမှဆေးပတ်လည်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အချို့ပစ္စည်းများသည်အခြားပစ္စည်းများဖြင့်လည်းတွဲသုံးရပါတယ်။ဥပမာလေဖြတ်သမားများဆိုရင်ကော်ဖီဖလပ်(စ်) ၊ဝေကီဝေရာနှင့်ခြေဖ၀ါးကပ်စသည့်တို့ဖြင့်တွဲသုံးရပါတယ်။ဇူလီယန်ကုမ္မဏီရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေသိသင့်တယ်။ဥပမာ – ကိုယ်အမှတ်၃၀၀အပါအ၀င်ကိုယ့်အောက်လူတွေရဲ့အမှတ်ပေါင်းလို့၅၄၀၀ဆိုရင်ကုမ္မဏီရောင်းအားတခုလုံးရဲ့ (ထိုင်း) ၆%ရမယ်၊ကိုယ့်အောက်ကလူတယောက်ဟာအက်စ်အီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကုမ္မဏီရောင်းတခုလုံး၁၄ % ရမယ်။အာရှနိုင်ငံခြားခရီးစဉ်သွားရမယ်။အက်စ်အီး၆ယောက်ဖြစ်ရင်တော့အထူးလစာ၊ကားရမယ်စတဲ့ ….. အချက်အလက်တွေသိသင့်တာပေါ့။
2. ဇူလီယန်အကြောင်းမသိသေးသူများကိုပစ္စည်းများအစမ်းသုံးခိုင်းခြင်းဖြင့်ဝယ်ရောင်းလုပ်ပါ။ထိုသို့ရောင်းသည့်အခါအရင်းအတိုင်းဖြစ်စေအမြတ်ယူ၍ဖြစ်စေရောင်းပါ။ဇူလီယန်ရှယ်ယာဝင်ထားသူများသည်ကုမ္မဏီတွင်ဝယ်ယူသည်ဖြစ်မ၀ယ်ယူသည်ဖြစ်စေမည်သူမှကန့်သတ်ချက်မထားပါဘူး။ရရှိပြီးသားရာထူးလည်းပြန်မကျပါဘူး။၀ယ်ထားပြီးသားအမှတ်များကိုတစ်သောင်းရှစ်ထောင်မပြည့်မချင်းလတိုင်းပေါင်းပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောနပ်လိုချင်တဲ့လဆိုရင်တော့အမှတ်၃၀၀ဖိုးဖြည့်ရမယ်။ငွေအားဖြင့်တော့၃၆၀၀ဘတ်ခန့် (တစ်သိန်းကျပ်) ရှိပါတယ်။ဥပမာကိုယ်အရင်ရှိထားတဲ့အမှတ်နှင့်ကိုယ့်အောက်ကလူတွေဝယ်ထားတာကအမှတ်ပေါင်း၁၅၀၀ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကအမှတ်၃၀၀မဖြည့်ပါက၁၅၀၀ဆိုရင်၆% (၅၀၀ဘတ်ခန့်) ဘောနပ်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မည်။ထိုကြောင့်ဝယ်ရောင်းလည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်လစဉ်အမှတ်၃၀၀ဖြည့်ဖို့မခက်တော့ပါဘူး။လစဉ်လည်းဘောနပ်ရတာပေါ့။
4. ဇူလီယန်မှာအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဇူလီယန်မှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါ။တက်ရောင်ကန်း ( ဝေဖန်ရေးနှင့်လေကန်ရေးသမား ) တွေရဲ့စကားကိုနားမယောင်ပါနှင့်။ဥပမာ-ကင်ဆာရောဂါအကြောင်းသိချင်ရင်ကင်ဆာရောဂါအထူးကု ( ကင်ဆာရောဂါတစ်မျိုးတည်းကိုလေ့လာလိုက်စားအထူးကု)ဆရာဝန်နှင့်မေးမြန်းခြင်းဖြင့်အမှန်သိနိုင်တယ်။ဇူလီယန်မှာသူများလိုအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုပစ္စည်းရဲ့ကောင်းကြောင်းနှင့်ဘောနပ် ( အကျိုးအမြတ် ) တွေဘယ်လိုရတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပါ။ကုမ္မဏီရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုလည်းရှင်းပြပေးပါ။ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်အကုန်လုံးလုပ်ကိုင်တက်လာအောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါ။ဒါမှသာလျှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးတက်လာမယ်သူလက်အောက်လူများကိုဦးဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အစစအရာရာလိုက်မလုပ်ပေးပါနှင့်။အချို့လူများသည်သူများရှယ်ယာဝင်ခိုင်းလို့ဝင်လိုက်သော်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာပေမယ့်မလေ့လာတော့ဘာမှလည်းမသိ၊အလုပ်မလုပ်တော့အကျိုးအမြတ်လည်းမရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုမပြောပဲသူများအပြစ်ပဲပြောလာပါတက်ပါတယ်။
လူမှာလည်းအချို့ကအရိပ်ပြရင်အကောင်မြင်တယ်၊အချို့ကအကောင်ပြမှအရိပ်မြင်တယ်၊အချို့ကအရိပ်နှင့်အကောင်ပြမှတော်ရုံလောက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်နှင့်ရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့လူတွေရဲ့သဘောသဘာဝကိုနားလည်ထားသင့်တယ်။ဒါမှကိုယ့်လူတွေကိုသူ့အလိုက်အထိုက်ဘယ်လိုကိုင်တွယ်သင့်သလဲဆိုတာကိုသိရှိနိုင်မယ်။မလိုက်လာဘူးဆိုရင်ထားခဲ့လိုက်ပါတော့။နံပါတ်၂နှင့်၃ကိုကိုယ့်လူစာရင်းထဲမှာထည့်ထားပြီးလူအယောက်၂၀ကိုတန်းစီးလိုက်ပါ။ပြီးရင်အဲ့ဒီ၂၀ထဲကအက်စ်အီး (အမှတ်တစ်သောင်းရှစ်ထောင်) ဖြစ်နိုင်မဲ့အလားအလာရှိနိုင်တဲ့သူ၁၀ယောက်ကိုရွေးရှယ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်အဲ့ဒီ၁၀ယောက်အမြန်ဆုံးအက်စ်အီးဖြစ်အောင်ကိုယ်ရှာလို့ရတဲ့လူသစ်တွေကိုလည်းသူတို့အထဲကိုလိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ထို့အပြင်သူတို့တွေအမြန်ဆုံးအက်စ်အီးဖြင့်အောင်သူတို့နှင့်ရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့လူတွေကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝအောင်လိုက်လံတွေ့ဆုံခြင်း၊အတွေ့အကြုံများဖလှယ်ခြင်း၊သတင်းအချက်အလက်များပေးခြင်း၊ကုမ္မဏီမှစီစဉ်ပေးသောအောင်မြင်တဲ့သူများလာရောက်ရှင်းပြသည့်အစီအစဉ်များကိုတက်ရောက်ခိုင်းခြင်း၊ကုမ္မဏီရုံးချုပ်ရှိသည့်ဘန်ကောက်သို့သွားရောက်နိုင်ရန်စီစဉ်ပေးခြင်းဖြင့်ကိုယ့်လူများအရည်အချင်းတက်လာသောအခါကုန်ပစ္စည်းဝယ်လိုအားတက်လာ၍သူတို့လည်းအက်စ်အီးဖြစ်ကိုယ်လည်းအက်စ်အီးမှဒီစီအမ်ရာထူးကိုအမြန်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဇူလီယန်မှာပန်းတိုင်ကိုအမြန်ရောက်၍အေးချမ်းစွာဖြင့်ဘ၀ခရီးလမ်းကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ (မှတ်ချက် – မိမိလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ကိုယ့်အပေါ်လူကောင်းစားမှာကိုမနာလိုဝန်တိုစိတ်မမွေးပဲမုဒိတာပွားပါ။မိမိနှင့်မိမိရဲ့အောက်ကလူတွေကြိုးစားရင်ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်ရမယ်ဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားရင်းကြိုးစားရင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုတွေမှရလာတဲ့ပီတိကိုခံစားပါ)
အလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာယခင်လိုအားကစားလုပ်မဲ့အချိန်တွေစာဖတ်ချိန်တွေစတဲ့အားလပ်တဲ့အချိန်ကိုဇူလီယန်အတွက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အားလပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဇူလီယန်နှင့်ပတ်သက်တာကိုလေ့လာတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုရှင်းပြတယ်။ဇူလီယန်စလုပ်ခါစမှာတော့ဇူလီယန်အတွက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးလေ။ဒါလည်းသဘာဝကျပါတယ်။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ဘောနပ်ကသိပ်မရသေးဘူးလေ။အက်စ်အီးဖြစ်လို့ဘောနပ်များများရလာရင်ပြောစရာတောင်မလိုတော့ဘူးအလိုလိုအားလာပါလိမ့်မယ်။တက်နိုင်ရင်ယခင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုစွန့်ပြီးဇူလီယန်ကိုပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်နိုင်ပြီလေ။ပစ္စည်းကလည်းအစပိုင်းတော့ဘောနပ်ကမရပဲဝယ်သုံးနေရတော့ထွက်ငွေကသိသာတယ်လေ။နောက်ပိုင်းဘောနပ်ရလာတော့ပစ္စည်းတွေကအလကားသုံးရတဲ့အဆင့်ဖြစ်လာတယ်။လူတွေကိုရှယ်ယာဝင်ဖို့စည်းရုံးတဲ့အခါလူအမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်တယ်။တချို့သိပြီးသာဒါပေမဲ့သေချာဘာမှမသိ၊တချို့ကဇူလီယန်ကအလိမ်တွေလို့ထင်လိမ့်မယ်သေချာသိလို့တော့မဟုတ်ယခင်လာစည်းရုံးတဲ့လူတွေကလိမ်ထားဖူးလို့၊အချို့ကအခြားကုမ္မဏီတွေမှာလုပ်ဖူးတယ်၊တချို့ကအခုကိုယ်ပြောမှသိစတဲ့လူအမျိုးတွေ့နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၁အရေးကြီးဆုံးကိုယ်ပါပဲကိုယ်ရဲ့ပြောပုံနေပုံကိုယ်ကျင့်တရားဇူလီယန်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိထားဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါ။ကိုယ်ကသူတဖက်သားနားလည်အောင်ရှင်းပြနိုင်ရမယ်သူမေးတဲ့မေးခွန်းတိုင်းကိုသူစိတ်တိုင်းကျတဲ့အထိအထောက်အထားခိုင်လုံစွာဖြင့်ရှင်းပြနိုင်ရမယ်တကြိမ်ပြောမရရင်နောက်တကြိမ်ထပ်ပြောရမှာပေါ့။အကောင်းဆုံးကတော့ဇူလီယန်အကြောင်းကိုသူတို့ပြေားထားတဲ့အတိုင်းအမှန်အတိုင်းရှင်းပြပါ။ကိုယ်ကလည်းပစ္စည်းကောင်းကြောင်းတွေကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ပြနိုင်မယ်။ကုမ္မဏီမှာလုပ်တဲ့သင်တန်း (အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်း) ခေါ်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှာပါ။အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မအားလပ်လို့ကုမ္မဏီကိုမလာနိုင်တဲ့သူတွေကိုခွေပြသခြင်းပစ္စည်းများ၏အကျိုးအာနိသင်ကိုရေးထားသည့်မြန်မာလိုစာအုပ်များကိုပြသခြင်းဖြစ်လည်းတော်တော်များများလက်ခံလာမှာပါ။လူ၁၀ယောက်မှာ၃ယောက်လက်မခံတာကိစ္စမရှိပါဘူးဘုရားတောင်အကုန်လုံးကိုကယ်လို့မှမရသေးတာသူရဲ့ပါရမီအနုအရင့်ကိုစောင့်ရမှာပေါ။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း သစ္စာဖောက်ခြင်း ဇူလီယန်ကုမ္မဏီမှာကိုဖြူနှင့်ရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့ကိုနီ၊ကိုဝါတို့နှင့်တွေ့တယ်။အဲ့ဒီမှာထူးခြားတာကကိုနီ ကအရင်ကတည်းကကိုဖြူ နှင့်ရှယ်ယာဝင်ပြီးသားဖြစ်သော်လည်းနောက် ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်မံရှယ်ယာဝင်တာကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့မေးလိုက်တော့သူပြောပြတာက “ ကျွန်တော် ကိုဖြူနဲ့ရှယ်ယာ ၀င်ပြီးသားပါ၊၊ ဒါပေမဲ့ ဘန်ကောက်ကကျွန်တော်နှင့်ညီအစ်ကိုနှစ်ဝမ်းကွဲတော်တဲ့သူတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီဝင်ပြီးသားကိုထားလိုက်ပါ။နောက်ထပ်ရှယ်ယာအသစ်ဝင်လိုက်ပိုက်ဆံသူပေးမယ်အရင်းအနှီးလည်းထုတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ကိုဖြူ နှင့်ရှယ်ယာဝင်ထားတာကိုပယ်ထားလိုက်ပြီးနောက်ထပ်ရှယ်ယာအသစ်ထပ်ဖွင့်လိုက်တယ်။” ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူကိုအကြံပေးလိုက်ပါတယ်။မင်း ကိုဖြူ လမ်းပြလို့ဇူလီယန်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့သူနှင့်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးရှယ်ယာဖွင့်လိုက်တယ်အခုသူများကအခွင့်အရေး နည်းနည်းပေး လိုက်တာနဲ့ယခုလိုလုပ်တာဟာကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားတာပေါ့။ ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ ပါးကိုပြစ်မှားတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်တော့ မအောင်မြင်ဘူး အောင်မြင်ခဲ့ရင်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီးလိမ့်မယ်။ဇူလီယန်ကျင့်ဝတ်အရရောလူမှုရေးကျင့်ဝတ်အရရောမင်းဖောက်ဖျက် တာပေါ့။ဒီလိုအခွင့်အရေးကိုတောင်ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီထက်ကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးတွေမှာဘယ်လိုယုံရမလဲငါတို့ကစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တစ်ယောက်တည်းချမ်းသာဖို့မဟုတ်ဘူး ကိုယ်ချမ်းသာရင်အများအကျိုးသယ်ပိုးနိုင်အောင်လုပ်ဖို့စိတ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်တာလူတွေဟာသေရမဲ့လူတွေပါမသေခင်မှာအများအကျိုးသယ်ပိုးရင်နဲ့ပဲဘ၀ကိုဖြတ်ကျော်ချင်တယ်ဟု ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဇူလီယန်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ လူဆင်းရဲပေမယ့် စိတ်ဓါတ်မဆင်းရဲစေချင်ဘူး အတက်နိုင်ဆုံး ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမတွေနှင့်အညီ စီးပွားရေး လူမှုရေး နိုင်ငံရေး လုပ်မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှုတွေ အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်ပြီး ယခုဘ၀ရော နောက်ဘ၀ ရော စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါလိမ့်မယ်။ ———————*************************————————–
ထိုင်းဘတ်ငွေမှ မြန်မာကျပ်ငွေကို သိချင်ပါက
ဥပမာ – သွားတိုက်ဆေး ( ရောင်းဈေး ၁၄၄ ဘတ် ) ၃.၅၀ ဘတ်ကို ၁၀၀ ကျပ်ဖြင့် တွက်ခြင်း
144 (အစား) ဝ.ဝ35 =4114 ကျပ်
မြန်မာငွေမှ ထိုင်းဘတ်ငွေကို သိချင်ပါက
ဥပမာ – သွားတိုက်ဆေး ( အရင်း ၃၃၇၂ ကျပ် )
3372 x 0.035 = 118 ဘတ် ဘောနပ်တွက်နည်း
အမှတ် 300 x 5.5 ( ၀ယ်လိုအား ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းကို ကုမ္မဏီမှ အရင် နှင့် အမြတ်ပြန်ယူ ) x3% – 22 % ( မိမိရသည့် ရာခိုင်နှုန်းအလိုက်မြှောက်ပါ )
အမှတ် 300 x 5.5.x 3% ( 49.5 ဘတ်ရမည် )
အမှတ် 300 x 5.5 x 22 % ( 363 ဘတ် ရမယ်လေ )
ဒါကြောင့် SE ဖြစ်သွားရင် ၁ မှတ် ၁ ဘတ်ကျော်လောက်ရတယ်
ဝန်ခံချက်။ ။ Google Group – Zhulian Family မှ နိုင်နိုင် မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ Share this:မြန်မာ-ဇူလီယန်TwitterFacebookLike this:Like Loading...	1 Comment
ဂျပန်ခရီးသွားနိုင်မည် ပရိုမိုးရှင်း « HotLine - 09425271099 says:	February 19, 2013 at 10:55	[…] ဂျပန်သွားနည်း […]